IBlack Shark 2 Pro ilinganiswa kwi-AnTuTu nge-Snapdragon 855 Plus | I-Androidsis
IBlack Shark 2 Pro ilinganiswa kwi-AuTuTu kwaye idlula isithintelo samanqaku angamawaka angama-450
UXiaomi ukhuphe ifayile ye- I-Black Shark 2 Pro, yeyona smartphone yakho inamandla, nge-30 kaJulayi, umhla owawuneentsuku ezimbini ezidlulileyo. Isixhobo, njengoko sasisaziwa ngaphambi kokuba sisebenze ngokusemthethweni, sisebenzisa i Snapdragon 855 Plus Ukusuka kwiQualcomm, iqonga elitsha nelinamandla lomzuzwana elijolise kwicandelo midlalo.
Phambi kokuba le terminal ifike, I-AnTuTu ibhalise i-smartphone egama lingu "BlackShark DLT-A0" kwiqonga layo lovavanyo. Oku kukwazile ukushiya amanqaku angama-405,598 amanqaku phaya, kwaye, kuyabonakala ukuba, yayiyinto efanayo ye-Black Shark 2 Pro esiyiqwalasele kweli thuba litsha. Nangona kunjalo, emva kokuba sele ikhona kwimarike yaseTshayina, Oku kulonyusile eli nani kwiziko ledatha ukuya ngaphezulu kwamanqaku angama-450 amawaka.
I-smartphone entsha yokudlala ishiye ingachazwanga Amanqaku angama-456,571 e-AnTuTu. Oku kuyibeka njengokumkani kweyona fowuni iqhuba kakuhle kwibhentshi. Nangona kunjalo, kufuneka kukhunjulwe ukuba Ifowuni ye-Asus ROG 2, Esinye isiphelo sendlela ye- abadlali Nge-Snapdragon 855 Plus, ayikavavanywa yi-AnTuTu okanye, ubuncinci, iziphumo zoku azikapapashwa kwindawo yogcino lwedatha.
Uvavanyo lweXiaomi Black Shark kwi-AnTuTu
Ngokweenkcukacha, iBlack Shark 2 Pro inamanqaku ali-109,193 kumanqaku ovavanyo lwe-GPU (iprosesa yemizobo), amanqaku angama-54,924 kwi-UX (inkqubo yenkqubo yokusebenza), i-140,041 kwi-CPU (iyunithi yokuqhubekeka embindini) kunye namanqaku angama-71,370 kwi-MEM (i-RAM kunye ne-ROM. Inkumbulo).
Masikhumbule ukuba, ukongeza kwi-SoC le mobile, inayo Isikrini esine-6.39-intshi ye-diagon ye-AMOLED enesisombululo esipheleleyo se-2,340 x 1,080 pixels kunye ne-240 Hz yokuhlaziya inqanaba. Emva koko, ixhobisa imemori ye-RAM eyi-12 GB kunye nendawo yokugcina eyi-128/256/512 GB kunye nomthamo weebhetri we-4,000 mAh ngenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza kwee-watts ezingama-27.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IBlack Shark 2 Pro ilinganiswa kwi-AuTuTu kwaye idlula isithintelo samanqaku angamawaka angama-450
IGlobal Buds iya kufumaneka ngombala omtsha oza kuqala iGlass Qaphela 10
Emva kweminyaka emi-5 iPost-Iqalisa usetyenziso lwayo kwi-Android